Ijoka Elilumayo Lalisetshenziselwa Ukwahlula iMarina eMexico - Ellicott Dredges
Swinging Dragon Dredge Isetshenziselwa Ukwebiwa kweMarina Eduze nasePuerto Vallarta, Mexico
Ku-2017 Ellicott Dredges, umakhi we-Baltimore, Maryland (USA) wethule Uchungechunge 460SL Swinging Dragon® dredge ikhasimende eliseduze nePuerto Vallarta, eMexico. I-dreege dreege njengamanje isetshenziselwa ukususa indle esikebheni sendawo yasolwandle kanye nesiteshi sokuzulazula esixhuma ngqo kuLwandle iPacific.
Ikhasimende likhethe i-460SL Swinging Dragon® dredge ngenxa yekhono dredge encane ukusebenza ngaphakathi futhi izikhala emincane futhi limited. ezindaweni ezinjengezikejana zesikebhe futhi kugcinwe ukujula kwesiteshi esidingekayo kwemikhumbi enkudlwana efana nama-yachts yangasese ukuhamba ngokuphepha emuva naphambili ngaphandle kokushaya i-agound.
Le dredge eguquguqukayo inesinqola esakhelwe ngaphakathi esithuthukisa i-dredge ngokushesha nangokunembile. Noma ngabe isebenza eziteshini eziwumngcingo kumodi yeswishi eshintshashintshayo noma ushintshela kumodi ejwayelekile yokwehlisa ukusikeka okubanzi, lo msebenzi owenziwa kabili unikeza opharetha we-dredge amandla okukhulisa umkhiqizo wabo wokubamba kabusha. Ngosizo olwengeziwe ukukhetha uhlobo olulungile lwe- Marina dredging imishini yephrojekthi yakho igcwalisa eyethu umbuzo wemibuzo namuhla noma usithumele i-imeyili ku-support@dredge.com.